Indawo yeHolide yaseAschka (Schönsee), indawo yeeholide, 70m² - I-Airbnb
Indawo yeHolide yaseAschka (Schönsee), indawo yeeholide, 70m²
UCarmen unezimvo eziyi-193 zezinye iindawo.
Igumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini, i-sofa yokutsala kunye negumbi lokutyela, ikhitshi langoku kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari inokungenisa ukuya kuthi ga kubantu abathathu malunga ne-70 m².
Yonwabela imbonakalo entle yobume behlathi eliPhezulu lePalatinate ukusuka kwibalcony okanye uphumle kwigadi yehotele.
Ukusetyenziswa kwe-Intanethi kwenziwa ukuba kwenzeke nge-WiFi yasimahla.
ESchönsee kwi-Upper Palatinate entle, indlu esanda kufakwa ifanitshala enembono entle ikulindile kwindawo ezolileyo.
ISchönsee yindawo ekuchithelwa kuyo iiholide evunywe ngurhulumente kwiHlathi eliPhezulu lePalatinate. Idolophu encinci ngokwayo kunye nommandla wonke unokuninzi okunikezwayo: kukho amathuba amaninzi okuthenga, imisebenzi emininzi yokuzonwabisa, iindawo zokutyela ezinezinto ezizodwa zengingqi, inkcubeko kunye nembali.
Nokuba unomdla kwiikonsathi okanye kwimidlalo yethiyetha, ungathanda ukufunda ubugcisa besintu obufana neleyisi, okanye ukhetha ukukhwela intaba kwaye ufumane iintlobo ezinqabileyo kwizityalo nezilwanyana ngelixa uncoma ubume bethu obukhethekileyo, kuxhomekeke kukhetho lwakho. Ukuhamba edolophini kwaye ujikeleze kuyo kuya kukukhokelela kwiindawo ezininzi zothando. Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kumda welizwe kunye neRiphabhliki yaseCzech. Ukuba unomdla, unokuthatha uhambo oluya kwilizwe elingummelwane. Kukho into nje yomntu wonke.
Ziphathe ngeholide yokuphumla kunye nathi eSchönsee-cima kwaye wonwabe into yokuba iiwotshi zicotha ngakumbi apha.
Singababuki beNurtschweg kwaye sinikezela ngenkonzo yokulanda kunye nokuhanjiswa kumgangatho wendlela yokuhamba ngeenyawo (inqanaba lesi-6).
Siyavuya kakhulu kuba uyikhethile le ndlu.
Thina kwi-OBS OnlineBuchungService GmbH siza kukuvuyela ukukunceda ngokucwangcisa iholide kwaye sicacise imibuzo yakho nombuki zindwendwe.
I-OBS OnlineBuchungService GmbH isebenza kuphela njengomntu olambelayo xa ubhukisha ngeAirBnB kwaye hayi njengombuki zindwendwe wakho ngqo kunye neqabane lakho lesivumelwano senkonzo yokuhlala ubusuku bonke.
Ngesiqinisekiso sokubhukisha esahlukileyo, uza kufumana eyona nkcazelo yokuqhakamshelana nombuki zindwendwe wakho kunye nenkampani esisebenzisana nayo.
Thina kwi-OBS OnlineBuchungService GmbH siza kukuvuyela ukukunceda ngokucwangcisa iholide kwaye sicacise…